Duqeyn lagu dilay sarkaal Shabaab ah – news
Howlgalkaan ayaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabab, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Komaandoos, waxaa uuna ka dhacay tuulada Cadaad Geri oo ku taallo inta u dhaxeyso magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere.
MUQDISHO, Soomaaliya - Howlgal dhanka cirka ah oo ka dhacay tuulada Cadaad Geri oo u dhaxeyso magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere ee gobolka Gedo ayaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa Alshabaab, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Yarow Cusmaan (Cabduqaadir Kumaandoos).
Howlgalkaan ayaa waxaa si wada jir ah u fuliyay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Danabad oo kaashanaya kuwa Mareykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay Hay'adda Sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
C/qaadir Kumaandos ayaa mar ahaa Madixii Jabhadaha Al-Shabaab, waxa uu sidoo kale u xuubsiibtay Qaybta dacaayadaha u faafisa Al-shabaab, iyadoona si weyn looga yaqaanay gudaha Al-Shabaab oo uu caan ka ahaa.
“Dilkiisa marka uu dhacayay waxa uu madaxa ka tirsanayay xoolo uu saami u helay oo ay Alshabaab baad ahaan kaga qaateen dadka degaanka” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka Danab oo la hadlay warbaahinta DF.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanayo kuwa Mareykanka ah ayaa howlgallo dhanka cirka iyo dhulka ah ka geysato deegaanada ay maamulaan kooxda Shabaab, oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka.